Isibambo Sompompi Wekhishi Esingashadile Ne-Pull Down Spray chrome
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / I-WOWOW Isibambo Sompompi Wekhishi Elilodwa nge-Pull Down Spray Chrome
I-WOWOW Isiphathi Esisodwa Sompompi Wekhishi Ngokudonsela phansi I-Chrome Spray
2310700C Imiyalo yokufaka
Ikhishi mixer tap chrome 2310700C
Impompo yokuxuba ekhishini ihlanganisa nje amanzi ashisayo nabandayo. Ungayixube kahle le mifula emibili yamanzi ngokusho kwezidingo zakho. Ukuze ukukunikeze ngokuqondile lokushisa kwamanzi okudingayo. Ukuxuba ukushisa kwamanzi kungenziwa ngesandla esisodwa ne-taper yokuxubha ekhishini ye-WOWOW. I-lever isebenza nje kahle futhi namanzi angalawulwa kalula. Kokubili izinga lokushisa nokucindezela kwamanzi uqobo. Uzoqaphela ngokushesha ukuthi le lever yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme. Njengoba ihamba kahle, futhi ingenayo i-backlash, uyazi ukuthi uqinisekiswa ukukhuthazela kwempilo ende.
Ungasebenzisa imisebenzi emithathu yamanzi ngenkathi uxuba ukushisa kwamanzi. Ku-spout ungakhetha imodi yokugeleza, imodi yokufafaza, nemodi ye-aqua-blade. Imodi ye-aqua-blade inikezela ngendiza enamandla yamanzi, ekhipha konke ukungcola kusuka ezimbizeni zakho namapani ngokushesha. Le modi ye-aqua-blade iyindlela eyingqayizivele ongeke uhlangane nayo kumompompi amaningi wokuxubha wasekhishini. Imodi yokufafaza iyindlela ephumelelayo yokuhlanza i-splatter-free, futhi imodi ejwayelekile yokugeleza iyindlela ekahle yokufaka izimbiza ngamanzi ngokwesibonelo. Zonke izindlela zamanzi zinikeza umsebenzi wokonga amanzi ukuze ukhule ekusetshenzisweni kwamanzi. Ngale ndlela uzonikela ingxenye yakho ukonga kwimithombo yemvelo enqabile. Ngaphandle kwalokho, uzokuqaphela lokhu kumthethosivivinywa wakho wamanzi, njengoba ungagcina kuze kufike ku-50% ekusebenzeni kwamanzi nge-chrome mixer chrome yeWOWOW.
I-chrome ephezulu yokuxhuma ekhishini ephezulu
I-WOWOW inikezelwe ukunikela ngamalayisi asezingeni eliphakeme kumakhasimende ayo. Yingakho i-WOWOW isebenzisa izinto ezidlula yonke imikhakha yezimboni, ngisho naleyo yama-A-brand. Ku-WOWOW sikholelwa ukuthi ngekhwalithi ephezulu ungenza umehluko emakethe. Uma umuntu esethole ithiphu yokuxuba ye-WOWOW, uzoba ikhasimende impilo yonke. Kungakho sibona isizinda samakhasimende ethu sikhula nsuku zonke. Ungabona ubuhle bethu kuzinhlelo zethu zokusebenza ezintsha, njenge-Neoperl aerator kanye nokuphothulwa kwama-faucets ngezinqubo eziphakeme kakhulu ze-electroplating. Siyaqiniseka ukuthi ungawasebenzisa ompompi bethu ukusebenza ekhishini isikhathi eside.
Kungaleso sizathu futhi lapho eWOWOW singesabi ukukunikeza isikhathi seminyaka emihlanu sewaranti ekhishini yokuxuba tap tap. Izinhlobo eziningi zethenucu zinikeza isikhathi sewaranti eyi-5. Lokhu kuyasebenza nakuma-A-brand amaningi. Njengompompi wokuxubha wasekhishini uvame ukuhlala iminyaka emi-1 kuye kweli-5, eWOWOW sinethemba lokukunikeza isikhathi semvume yeminyaka engu-10. Kungaba yinto engjwayelekile kakhulu uma ithiphu yokuxuba ekhishini ingafakwa esikhundleni seminyaka eyi-5 ngemuva kokuyifaka. Futhi sizothola ukuthi nayo ayemukeleki, ikakhulukazi ngokubuka kwamakhasimende ethu. Kungani kufanele ubhekane nemiphumela yalokhu? Kungakho-ke singasusa ithiphu yokuxuba ekhishini uma ingeke isebenze kahle kungakapheli iminyaka emi-5. Ngaphandle kwezinkinga!
Donsela phansi umpompi wokuxubha wesifutho
Ukusebenza kokubamba ngamehlo kwekhompiyutha yokuxuba ekhishini kuyinto efafaza ngayo. Ungadonsa ngokushelela ikhanda lokufafaza lale klip yokuxuba ekhishini bese kuvela i-hose emanzi ende. Ngalesi hose samanzi ungafinyelela kunoma iyiphi indawo ngaphakathi noma ezungeze ikhishi lakho.
Le hose yamanzi yenziwa ngejeli eguquguqukayo yesilika, ngakho-ke uyaqinisekiswa ngokusebenza okulula njengoba ikhipha kalula. Futhi ngemuva kokuyisebenzisa, izobuyela emuva ngokuzenzakalelayo ngenxa ye-ravity ibhola efakwe ngokungabonakali ekhabethe lakho le-sink ekhishini.I-hose yamanzi nayo yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu. Ngale ndlela akudingeki ukhathazeke ngokugqoka, ukudonsa noma ukuvuza. Le chrome yokuxuba ikhishini yokuxube yonke ekhishini ihlala iminyaka eminingi. Lokho kuyisiqinisekiso esingathanda ukukunikeza sona.
Sebenzisa i-chrome yokuxubha yokusetshenziswa ekhishini
Ngenxa yekhwalithi ephezulu esinikeza nge-tap chrome yethu yokuxuba ikompiyutha, le empompini yokuxuba ekhishini ivame ukusetshenziswa ezindaweni zokuthengisa. Ezitolo zokudlela kanye nemigoqo ukusebenza kahle kwemishini yasekhishini kubalulekile ekusebenzeni kwayo kokusebenza. Uma ithiphu yokuxuba ekhishini ingaphuma, kungalimaza kakhulu ibhizinisi uqobo. Ngakho-ke, izindawo zokuhweba ezinjengezindawo zokudlela zingaxhomekeka kuphela ezintweni ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Ngenxa yalokhu, eWOWOW sikuthola kunomvuzo ukuqaphela ukuthi izindawo zokudlela eziningi zisetshenzisile ompompi bethunga bekhishini. Isiqinisekiso sesithembiso sekhwalithi esisinikezayo.
I-chrome ehlanganayo ekhishini eshisayo
Ngaphandle kwekhwalithi nokusebenza kahle, ekhaya nasendaweni yokudlela, i-chrome mixer tap ekhishini inikezela ngezinga eliphakeme lokukhanga ngobuhle. Okokuqala nje ngenxa design yayo ephezulu ye-arc ehlanganisa isitayela nokusebenza, ngoba usengakwazi ukufinyelela kalula isinki yekhishini. Abaklami be-WOWOW banikezelwe ukunikela ngemiklamo enesibindi engalingana kunoma iyiphi ikhishi lokuklama. Ngaleso sizathu i-WOWOW's kitchen mixer tap chrome nakanjani ayifani nanoma iyiphi enye kampompi yokuxuba. Isisekelo sokuxubha ekhishini sincanyana phezulu nobubanzi ezansi. Ulayini ophelele okhaliphile wale kampompi wokuxubha ekhishini muhle ngokwedlulele futhi unikeza ikhishi lakho ubuhle. Futhi uma uzungeza kampompi wokuxuba, umklamo ngeke uphelelwe ubuhle bawo nakancane.
Konke konke, i-tap chyp mixer ye-ekhishini ye-WOWOW ikunikeza inani elikhulu kakhulu lemali ongayithola emakethe. Futhi ngaphezu kwakho konke, uthola ucezu olubushelelezi nenhle lwemishini yasekhishini ezodonsela noma ikuphi ukunakwa ekhishini lakho, noma ngabe kusekhaya noma kuyathengiswa. I-chrome mixer tap chrome iza newaranti yeminyaka engu-5 kanye nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ubengenakukholwa yi-switch chrome exubanisa ekhishini, uvunyelwe ukuyibuyisela kithi ngaphandle kwemibuzo ebuziwe. Uzothola imbuyiselo ephelele ngokushesha. Siyethemba imikhiqizo yethu futhi sinethemba lokuthi uzothanda nekhamera yethu yokuxuba ikhompiyutha.
Izinzuzo zekhishini lokuxuba ikhishini ukuxhuma i-chrome ngamafuphi:
Izici zokuxuba ezinhle kakhulu
Izindlela ezintathu zamanzi
Isici sokonga amanzi
Umklamo wesitayela nenhle
I-SKU: 2310700C Categories: Donsela Phansi Oompompi Bekhishi, Ikhishi Faucets Tags: Ikhishi Sink Mixer, I-Swivel Spout